Egwuregwu kachasị mma na ire ere maka Black Friday ị ga-azụta | Gam akporosis
Egwuregwu egwuregwu kacha mma dị na ire ere maka Black Friday nakwa na ị ga-azụta ee ma ọ bụ ee
Ọ bụghị na anyị na-amanye gị ịzụta nke ọ bụla egwuregwu kacha mma gam akporo kacha mma na ere ere maka Black Friday, ma ị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihie ụzọ dị oke njọ ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala otu n’ime ha adaghị n’ime akpa gị; dị ka agafela onyinye ndị a nke ụdị ngwaọrụ niile, ma ọ bụ chollazo nke Black Friday dị ka mkpanaka.
Bịanụ gịnị enwere ọtụtụ ndị dị oke mkpa iji zụta ha. Becausefọdụ n'ihi na ọ naghị adịkarị ịchọta ha na ire ere, na ọkachasị n'ihi na emelitere ha n'afọ a ka ha wee kwekọọ na njikwa na ntanetị aka, na ndị ọzọ n'ihi na ha na-abụkarị na ọnụahịa dị oke elu na oge a na mbelata a bụ ihe kwesịrị ịrịba ama . Gaa maka ya!
1 XCOM: Iro N'ime
2 Castlevania: Symphony nke abalị
3 Ọkụ Don Start Starve
4 Ihe fọrọ nke nta ka ọ kwụsị
5 Usoro Rusty Lake
6 Agha Chasers: Nightwar
9 Ncheta Valley 2
10 Nke a bụ ndị uwe ojii 2
11 Roomlọ ahụ: Mmehie Ochie
XCOM: Iro N'ime
Un atụgharị dabeere ọgụ game na a oké usoro akụrụngwa nakwa na anyị nwere ya ugbu a dị ka onyinye ị ga-esi na € 5,49 ruo € 2,09. Site na ihu igwe onyonyo na eserese dị elu, ọ ga - aghọ otu kachasị mma anyị nwerela na gam akporo n’ime afọ ole na ole ugbu a. Ọ gụnyekwara usoro ọtụtụ mmadụ iji soro ndị ọrụ ibe gị na ndị enyi nwee ọ greatụ, yabụ ọ na-ewelarị oge iji nweta ya egwuregwu a nke e wepụtara na 2014.
XCOM®: Iro N'ime
Passed gafere akụkụ ndị a na hapụ anyị echiche kacha mma maka oke mma ahụ na pikselụ ma duru anyị gaa Alucard onye ga-esi n'ụzọ ụlọ Dracula gafee. Egwuregwu egwuregwu mara mma nke a na-emegharị na mkpanaka ka ị wee nwee obi ụtọ otu n'ime ndị malitere ihe a na-akpọ "metroid"; na nke nwere mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ ugbu a, anyị nwere otu kachasị mma. Ogo ka ndị ahụ € 0,50 abụghị ihe mgbochi nye otu n'ime azụmaahịa kacha mma Black Friday na egwuregwu gam akporo.
Ọkụ Don Start Starve
Uno nke kacha mma lanarị anyị nwere na gam akporo na nke si sde Steam kwere nkwa awa na awa nke ntụrụndụ. N'iji ụdị ọhụụ dị iche iche, ị ga-achọta ndụ gị na agwa a ịchọta ndị sitere na ụwa ndị ọzọ, ndị nwere oge na-adịghị mma n'abalị ma na-enweghị ngwaọrụ mmadụ enweghị ike ịlanarị. Egwuregwu dị na gam akporo maka afọ ole na ole ugbu a na nke ahụ abụghị oge mbụ ọ na-ere. Ugbu a ị nwere ya maka € 0,99 mgbe ọ na-efukarị € 4,49. Otu n'ime ihe dị mkpa na gam akporo maka ndị na-amasị nlanarị.
Anọla agụụ: Ego akpa
Developer: Nnukwu Ntụrụndụ Inc.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ kwụsị
O doro anya na ndị na-egwu egwu bụ ndị bipụtara Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha bụ ndị nọ n'azụ anyị na-enwe nnukwu mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ na gam akporo na aka anyị. Egwuregwu akụkọ nke na mmadụ mbụ anyị ga-eche mkpebi ihu nke ahụ ga-ejedebe na njedebe dị iche iche na nsonaazụ maka eri nkịtị nke na-eduga anyị site na egwuregwu ọzọ pụrụ iche nke onye nchịkọta akụkọ a na-ebupụta. Isi ise nke dị ugbu a na price 0,99 mgbe ọ na-efukarị € 3,99.
Usoro Rusty Lake
Rusty Lake bụ usoro nke atọ ihe omimi maka gam akporo nakwa na ha anatala nlezianya dị mkpa iji chọta ọtụtụ puku nbudata maka egwuregwu egwuregwu. Ha atọ dị na ire ere: Rusty Lake Paradise na € 1,79 (mgbe ọ na-abụkarị € 3,59), Rusty Lake Roots na otu ụdị gara aga na otu ego, na Rusty Lake Hotel nke na-esite na € 2,29 ruo € 1,19. Ntughari, mkparịta ụka dị mma, ụdị ọhụụ pụrụ iche na ahụmịhe zuru oke iji nwee ọ enjoyụ ụbọchị ndị a nke Black Friday nke ọhụụ atọ kachasị atọ ị ga-ejikọ.
Rusty Lake: Mgbọrọgwụ
Developer: Ọdọ Mmiri Rusty
Rusty Lake nkwari akụ
Agha Chasers: Nightwar
Ihe niile a uzo dabeere ọgụ RPG iju que si na consoles iji nyere Gully na-eto eto aka ịchọta nna ya furu efu. Otu RPG nwere ezigbo ọrụ yana otu n'ime akụkọ ndị ahụ mere ka anyị jide anyị ruo mgbe anyị jisiri ike rụchaa ya. Ga-enweta enyemaka nke ndị dike 5 iji mikpuo onwe gị na ndị dungeons ndị ahụ enweghị usoro nke etinyela egwuregwu a dịka otu n'ime egwuregwu kachasị mma na-egwu na gam akporo. Emepụtara ya site na ncha maka mkpanaka, yabụ na ị nwere ihe niile maka mbelata ego site na .9,99 1,99 na-efu ihe ruru € XNUMX.
Developer: Aha njirimara
Ndị ọzọ site na ebube nke Amanita Design na Samorost 3 na nke anyị na-elekọta a pụrụ iche gnome onye ya pụrụ iche ọjà ga-enwe ike na-enwe ọganihu site magically adọta gburugburu na-eduga anyị n'otu n'ime ndị gaminggba Cha Cha ahụmahụ nke ọma ekweisi na-ekwesịghị. Site na ndị okike nke Machinarium anyị nwere n'aka anyị ọla a dị ka njem iji tufuo onwe gị ma si otú nwere ezigbo oge na mobile. Si na € 4,99 gaa € 0,89 a Black Friday.
Developer: Ekike Amanita
Na mbụ site na Amanita Design nke ahụ bịara na gam akporo iji nwee obi ụtọ site na ekwentị nwere otu egwuregwu kacha mma indie kere n'afọ iri gara aga. Dị ka nke gara aga, ị ga - eme ka tamụnna Black Hat kpọọrọ Berta. Nke a bụ otu esi esi kpochapụ akụkọ na ụfọdụ ebe na ịma mma na ihe atụ ndị siri ike ịhụ na egwuregwu ndị ọzọ. Maka aha a, anyị na-ege ntị mgbe niile na egwuregwu niile Amanita wepụtara na Playlọ Ahịa Play, ebe ọ bụ na onye ọ bụla n'ime ha bụ anwansi dị ọcha. Anyị na-aga € 0,89 na ire ere site na € 4,99 na ọ na-akwụkarị ụgwọ.
Ncheta Valley 2
Okwu enweghị ike ikwu maka Ndagwurugwu Ncheta 2 nke ụbọchị a na-ere na € 0,99. Ọzọ nke dị oké mkpa ịzụrụ na ndepụta na na-ewe anyị azụ ka ụwa Escher ebe-agaghị ekwe omume jiometrị na-eme ka ya na ya mgbagwoju anya. Have ga-eduzi nne na nwa ya nwanyị na ụwa ndị ahụ na-agaghị ekwe omume ebe ụda ụda pastel na ụdị ọmarịcha ọkwa na eserese gbanwere nke abụọ a na nkeji ọla ọzọ nke egwuregwu vidio.
Developer: egwuregwu ustwo
Nke a bụ ndị uwe ojii 2
Handygames na-ewetara anyị nke a egwuregwu nkedo nke anyi nwere ike itughari iwu dika anyi si acho. Anyị na-elekọta ngalaba sheriff, anyị na-achịkwa ndị uwe ojii, anyị kwesịrị ịhụ na "udo na-achị" n'obodo ahụ. Ọfọn, udo ka anyị na-atụgharị ihe udo bụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbụ ezigbo ma ọ bụ ihe ọjọọ cops. Strategy, ntụgharị dabeere na ọgụ na nkedo maka egwuregwu magburu onwe ya nke ị nwere ugbu a maka € 1,49 mgbe ọ na-efukarị € 7,99. Ya mere echela ka ijide egwuregwu egwuregwu ndị uwe ojii a.
Roomlọ ahụ: Mmehie Ochie
Uno otu n'ime "ụzọ mgbapụ" kachasị mma na anyị nwere na gam akporo na maka Blackfriday 2020 a na-agbada ọnụahịa ya na 0,99 5,49 site na € XNUMX. Ohere di uku nke inwe obi uto na ikuku nke gburugburu nke gbara ha gburugburu. Egwuregwu dị elu dị elu iji mebie isi anyị ma gbalịa imecha ya niile.
Developer: Egwuregwu ọkụ
Uno otu n’ime egwuregwu na-atọ ọchị anyị nwere n’oge na-adịbeghị anya na nke anyị nwere ugbu a maka Black Friday site na € 6,49 ruo 2,69 XNUMX. Na egwuregwu a niile akụkụ nke ahụ protagonist ha dị mma maka ịrapara na nkuku nke ụlọ ndị toro ogologo ma ọ bụ nwee mmetụta maka onwe anyị ka physics nke ihe si arụ ọrụ na oge na-atọ ọchị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ezigbo oge, echefula oge atọrọ na egwuregwu a maka gam akporo.
Mmadụ: Fall Flat
Site na ndi okike njem ochie Ihe omimi a biakutere anyi ka anyi were ndu ozo ka obi iru ala sa ahu anyi. Anyị na-ekwu ya n’ihi na ELOH ga-esonyere ya site na ụda ụda dị egwu dịka ọ bụ egwu na-enweghị atụ nke nwere ọtụtụ ụda. Ya mere, egbula oge ịnụ ụtọ ụfọdụ ekweisi dị mma nke a dị egwu maka ugbu a maka € 1,19 mgbe ọ na-abụkarị na 3,49 XNUMX.
Nke a bụ otu anyị si mechaa ndepụta a na anyị ga-emelite ma ọ bụrụ na nke ọ bụla Egwuregwu egwuregwu kacha mma na ire ere ụbọchị ndị a Black Friday nke iji kwakọba egwuregwu dị mma maka ụbọchị ndị a nke ịnọ n'ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu egwuregwu kacha mma dị na ire ere maka Black Friday nakwa na ị ga-azụta ee ma ọ bụ ee
A mara Poco M3 na Snapdragon 662 na nnukwu batrị